Ikhefu Recipe "I-Cashage yaseMonastic"
Ikhefu "Indlu yaseMonastic" kunye ne-cherry Yonke into eyaziwayo neyintanda, kunye nekhekhe elenziwe ngekhaya elaliyi-"Cashage yaseMonastic" liya kuhobisa ngokuthe tye itafile yakho kungeyiyo kuphela itiye, kodwa isidlo sakusihlwa. Le khekhe ihlale ikhumbuza ikhaya lethu elifudumalayo, iintsapho kunye nexesha lokungabikho abantwana. Ndandifuna le recipe kwaye andizange ndiqiniseke ukuba iya kusebenza ngendlela endiyikhumbulayo. Ndiyifake le khekhethi ukuze uyiqwalasele kwaye ndiqinisekile ukuba, ngokwendlela yam iresiphi kunye nenkcazo, nokuba umntwana oya esikolweni uya kuba nokupheka ikhekhe. Ukhilimu omuncu omncuba omncinci kunye nenhlama emfutshane, apho i-cherry ihlanganiswe, izaliswe ngokucoca ukhilimu omuncu akuyi kukushiya ukungaboni. Ikhekhe kufuneka igcine ubuncinane iiyure ezingama-24. Yonke into efanelekileyo!
Umgubo wengqolowa 580 g
Ushukela 70 g
I Cherry efriziwe 900 g
Ushukela, i-vanilla 30 g
I powder ye-Sugar 150 g
Ukhilimu omuncu 800 g
Ukhilimu omuncu 50 g
I-Chocolate emnyama 80 g
Inyathelo 1 Lungiselela izithako: i-cherry efriziwe, ehlanjululwayo kwaye ishiywe iiyure ezingama-2 ukucima; umgubo, ushukela, i-sugar powder, i-vanilla ishukela, i-temperature yecala ye-oyile, ukhilimu omuncu, i-fat, i-tshokoleta
Inyathelo 2 Nangona i-cherry ishicilela kwaye idonsa, xuba inhlama. Sithatha ibhotela, faka ukhilimu omuncu kunye ne-whisk ngomzuzu 1.
Isinyathelo 3 Phakamisa umgubo oxutywe kunye ne powder baking.
Inyathelo 4 Hlanganisa kakuhle nomxube kuze kube yimvumba.
Inyathelo 5 Hamba iqanda uze uqoke inhlama kwisiqwenga.
Inyathelo 6 Khawuleza uhlula inhlama ibe ngama-15 alinganayo. Ukuze kube lula, ndazilinganisa zonke iibhola, malunga nebhola eli-1 - 68-69 g. Siyifake kwifilimu yokutya nganye kwaye siyihlambulule kwiqrijini iiyure eziyi-2-3 (ndishiye ubusuku bonke).
Inyathelo lesi-7 Ukusuka kwibhola nganye, siza kubumba i-sausages 8-10 cm ubude. Emva koko, i-proroshim yefestile yendawo yokusebenzela, qhaqa intlama ibe yi-8-8 cm ububanzi kwaye malunga ne-25-30 cm ubude. ukuthungela phantsi. Fumana iigulules.
Isinyathelo 8 Bhaka kwi-oven esandulelekile kwi-180 ° C ephepheni elinephepha elimalunga ne-17-25 imizuzu kude kube nombala wegolide wefestile. Masipholise.
Inyathelo 9 Ukuhambisa i-ukhilimu omuncu obandayo kunye ne-sugar powder kunye ne-vanilla ushukela kwisikhilimu esityebileyo.
Inyathelo 10 Ngaphantsi kwesitya, sasaza ukhilimu omncinci kwaye usasaze ama-tubes ama-5.
Inyathelo 11 Ukusabalalisa ngokubanzi 1/5 yekhilimu phezulu nangecala.
Isinyathelo 12 Sibeka amabhubhu amane, siwahambisa kunye kunye neziko. Kwaye siyakhupha ngekhefu.
Inyathelo 13 Beka iibhubhu ezi-3 kunye ne-cream.
Inyathelo 14 Iiphakheji eziphezulu ezi-2 kunye nekhefu.
Inyathelo 15 Ekugqibeleni 1 ukusuka phezulu phakathi.
Inyathelo le-16 Qala phezulu kunye namacaleni ngekhilimu esele. Sihlambulula kwiqrijini iiyure ezingama-24 okanye ngaphezulu.
Inyathelo 17 1 iyure ngaphambi kokuba usebenze, lungisa i-glaze: udibanise ukhilimu omuncu ngebhotela kunye nobushushu, faka i-tsholethi uze unyibilike ekushiseni okuphakathi. Sipheka, sivuselela imizuzu emi-2. Vumela ukupholisa kwindawo yokuhlamba i-ice.
Inyathelo 18 Phalaza i-glaze epholile ukuya kuma-degrees angama-35 kwikhekhe ukusuka phezulu kunye nobude obude. Masikhulule ukuba sisasaze. Masiqhube kwifriji.
Inyathelo 19 Siza kuhobisa ikhekhe nge-cherries, into enomdla!
Charlotte nge cherry
I-Cottage ushizi casserole kunye ne-vanilla kunye ne-ukhilimu omuncu
UClafuti kunye nama cherries
Ikhekhe "iminwe kaDina"
UBarack Obama ufumana ukunikezelwa kwezandla kunye nentliziyo kuMongameli weZimbabwe
I-Mutton, i-stewed ne-cinnamon kunye ne-prunes
Indlela yokuphumelela inhlonipho yabantwana?
Rigatoni kunye ne-spicy meat sauce
I-Stew ye zucchini kunye neetatata
Isobho se-Cream kunye neententili
Indlela yokuchazela umhlobo ukuba umfana akayithandi
UPawulos Wesley, indima kwiifilimu
I-glucose ibuyiselwe ngokukhawuleza nge-15 kilogram, isithombe
Isaladi yezithelo kunye nesiraphu yobusi
I-Meatloaf ne-bacon ne-ricotta